Olee otú ịhọrọ centrifugal ịgba draya n'ụzọ ziri ezi? - China Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment
Olee otú ịhọrọ centrifugal ịgba draya n'ụzọ ziri ezi?
Onye ọ bụla na-eji nke a na ngwá ga-amarakwa na centrifugal ịgba draya nwere ike igwu a dị ike ọrụ na-arụ ọrụ, na ihicha ọnụego dị nnọọ ngwa ngwa, na-ike-ekwe nkwa na àgwà nke na ngwaahịa, na-emekarị na-eji na okpomọkụ mwute ọgwụ ihicha ọgwụgwọ. Ke adianade do, ịgba draya nwekwara ike-eji kwadebe microcapsules, na nwere ike isi nweta ezigbo ọgwụgwọ mmetụta. Ya mere, olee otú anyị si ahọrọ?
Mbụ, mgbe na-eme nhọrọ, zui na-mgbe na-atụnyere ọtụtụ dị iche iche nke ngwaọrụ. Ọ dị mkpa iburu n'obi na ị ga-ahọrọ ndị ngwaọrụ na izute gị mkpa, nke bụ ihe siri na Ọdịdị na-achọ obere ohere maka otu ọrụ.
Nsogbu nke abuo, mgbe anyị na-zụọ ahịa maka ịgba dryers, bụ na zui na-mma na-achọ ngwaọrụ ndị ọzọ na akpaghị aka na mfe ịchịkwa. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-abụ ihe adaba na mfe iji rụọ ọrụ, nke nwere ike belata ọnụ ọgụgụ nke rụọ na-azọpụta-akwụ ụgwọ.
Nke atọ, anyị ga-ahọrọ bụ ngwá ọrụ na a pụrụ ịdabere na na ike arụmọrụ, obere oriri ike na elu arụmọrụ, nke mere na anyị nwere ike mma na-enyere anyị rụchaa ọrụ.
Fourthly, ọrụ kwesịrị mbụ dokwuo anya ha hà n'ezie chọrọ, nakwa dị ka kpọmkwem ihe na ihe onwunwe Njirimara, na-hụ na size nke nozulu nke ahọrọ ihe ruru ihe a chọrọ. Ya bụ, anyị kwesịrị ịhọrọ ndị ịgba draya ngwá pụrụ inyere anyị rụchaa ọrụ ọma.
Otú ọ dị, ọbụna ma ọ bụrụ na ihe kwesịrị ekwesị na ngwá họrọ, e nwere ike ịbụ ụfọdụ nsogbu na ngwa ahụ n'ezie. N'oge a, anyị mkpa ịtụle ma ọdịda ịgba draya nwere nsogbu ọ bụla, dị ka ma à nri ọsọ, okpomọkụ ọnọdụ bụ ihe ezi uche, na àgwà nke ihe onwunwe ya, wdg, na mgbe ahụ nd-ịgbanwe ya